अयोध्यापुरी पुगेर ओलीले सुनाए राम जन्मभूमिको यस्तो रोचक तथ्य — Sanchar Kendra
अयोध्यापुरी पुगेर ओलीले सुनाए राम जन्मभूमिको यस्तो रोचक तथ्य
अयोध्यापुरी कहाँ हो त ? मैले अध्ययन गर्न थालेँ । जनकपुर, वाल्मीकि आश्रम, सिता अन्र्तध्यान भएको देवघाट आदि ठाउँ । यहाँका नदीनालाका नाम । यहाँको स्थान र यी सबै उपलब्ध खोजको अध्ययन गर्दै जाँदा यो ठाउँ नै राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी भएको मैले निष्कर्ष निकालेँ ।
ती प्रमाणसँगै शास्त्रमा वर्णन गरेका कुराहरु । विश्वामित्र ऋषि कोसी नदी तरेर पश्चिमतिर आएर राम लक्ष्मणलाई शिक्षादिक्षा दिए भन्ने कुरा, त्यो पश्चिम कता हुनुपर्छ ? रामले अस्वमेद यज्ञका लागि छोडेको घोडा पश्चिमतर्फ गयो र वाल्मीकि आश्रममा लवकुशले समाते । उहाँ फैजावादवाला अयोध्या, उहाँबाट पश्चिमतिर छोड्दा त दिल्लीतिर पो जान्छ । यहाँ कता वाल्मीकि आश्रममा ?
उहाँ (फैजावाद)को रामलाई यहाँ देवघाट बोलाउने कुनै अर्थ हुँदैन । यहीँ (माडी अयोध्यापुरी)को रामलाई देवघाट बोलाएको हो । अलिक अगाडि देखि भन्दै आएको थिए कि राम नेपालीका छोरा हुन् । त्यतिबेला नेपाल थियो तर भारत देश थिएन । साना राजा रजौटाहरु थिए ।
यहाँबाट देवघाट र वाल्मीकि आश्रम नजिकै । जनकपुरमा जनक राजाले आफ्नी छोरीको स्वयम्बर बलशाली युवासँग गराउने भएछन् भन्ने सुनेपछि ‘हामी पनि जाउँ’ भनेर लक्ष्मणले रामलाई लिएर गए । त्यसरी बलशाली राम गएर परशुरामले ल्याएर राखेको शिवको धनुको धाँदो तान्ने बित्तिकै धनु भाँचियो । त्यसपछि सीतको स्वयम्बर त्यहाँ भयो रामसित । उहाँ (भारत)को अयोध्याबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । त्यतिबेला प्रतापि राजा महाराजाहरुको बसोबास यसै क्षेत्रमा हुन्थ्यो ।
माडीमा राम मन्दिर निर्माण भएपछि सोहि निर्वाचन क्षेत्र भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिएको उनले टिप्पणी गरे । चार वर्षअघि चुनावका बेला माडीलाई मणी बनाउँछु भनेको स्मरण गर्दै उनले भने–‘अब त म होइन, राम नै फर्किर आइसक्नु भो । माडीलाई मणि बनाउन । अब मणि बन्दैन ?’